Ny mari-pankasitrahana fizahan-tany grika dia mankany amin'ny Visitmeteora.travel
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Greece » Ny mari-pankasitrahana fizahan-tany grika dia mankany amin'ny Visitmeteora.travel
Enga anie 3, 2017
Tamin'ny taona 2016 sy 2017, nahazo ny loka volamena tamin'ny loka Greek Tourism Awards i Visit Meteora, noho ny hatsarany amin'ny marketing / marika ary fitantanana an'i Meteora. Ity orinasa ity dia manolotra fifangaroana traikefa nahafinaritra sy tsy hay hadinoina teto amin'ny faritr'i Meteora ary koa manodidina azy, miainga amin'ny fitsangatsanganana malefaka sy fitsangatsangan-javatra ka hatrany amin'ny dia sy fifindra-monina any amin'ny toerana iray mahavariana indrindra any Gresy.
Visit Meteora dia vondrona matihanina amin'ny dia ary manam-pahaizana momba ny toerana itodiana izay nanambatra ny talentany, ny fahalalany, ny fananany ary ny fitiavany dia ho mpisava lalana an'ny Destination Management Company any Meteora Greece. Mirehareha be izy ireo fa ny fitsangatsanganany rehetra dia omen'ny mpanjifa tombam-bidy tokoa, manaporofo ny fanoloran-tenan'ny orinasa maharitra amin'ny fahombiazana amin'ny zavatra rehetra ataony. Ambonin'ny zava-drehetra, ny tanjona lehibe nandritra izay taona lasa izay dia ny hampifandray ireo mpitsidika ny votoatin'ny atao hoe fitsidihana an'i Meteora: traikefa iray tena niova tanteraka tamin'ny fahagagana voajanahary.
Ny mpihaino kendren'ny DMC dia ny mpitsangatsangana tsirairay izay mitsidika an'i Gresy ary mitady traikefa tsy hay hadinoina sy tsy manam-paharoa. Meteora dia iray amin'ireo zava-nisongadina fa tsy an'i Gresy ihany fa an'i Eropa. Vondrona kendrena toa ny arivo taona sy ny taranaka X mandra-pahatongan'ny zaza boomers, miaraka amin'ny fianakaviana, mpivady, mpandeha irery, ary vondrona sakaiza manerana an'izao tontolo izao, Visit Meteora dia manana mpanjifa avy any Etazonia, Kanada, Amerika Latina, Aostralia, Eropa, ary Azia.
Ny drafitra voalohany dia ny famoronana orinasa DMO tsy miankina sy orinasa mpizahatany mpitsidika eo an-toerana miaraka. Fantatr'izy ireo fa ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa fizahan-tany any Meteora dia midika fa amin'ny maha orinasa mpizahatany azy ireo dia tsy maintsy mampiroborobo ny toerana rehetra haleha izy ireo, ao anatin'izany ny hotely, ny fizahantany fizahan-tany, ny trano fisakafoanana ary ny hetsika ivelany - toa ny DMO. Tena fanamby ny hoe mpiasan'ny fizahan-tany eo an-toerana ary miaraka amin'izay koa manao zavatra toy ny birao fampahalalana ho an'ny fizahan-tany ho an'ny besinimaro - (hita eo amin'ny) toerana fizahan-tany afovoany, mamorona sy manolotra sarintany maimaim-poana na aiza na aiza, miasa amin'ny dian'ny haino aman-jery sy fitsangatsanganana familiarization, mamokatra atiny kalitao audiovisual, ary mamorona vokatra vaovao. Ny orinasa dia te-hanao fitsidihana Meteora ho traikefa miavaka ho an'ny rehetra, ary tsy hisintona ny fijanonana mihitsy izany.
Ankoatra ny fanolorantenany ho an'ny mpanjifany dia manolo-tena ho an'i Meteora sy ny tontolony koa ny orinasa. Manolotra serivisy fizahan-tany maharitra sy tompon'andraikitra amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny dian-tongan'ny karbôna sy ny fifehezana ny famoahana CO2.
Ny fitsangantsanganana dia noforonina sy ampiasain'ny mponina miaraka amina fahalalàna madio momba iny faritra iny, izay mampiharihary ny mpitsidika tsy ireo tsangambato fanta-daza ihany fa koa ireo vatosoa miafina ao amin'ny toerana itodiana. Ny fitsidihana an'i Meteora dia manolotra fitsangatsanganana an-tany maro any amin'ny tanibe Gresy, ary namorona vondrona akaiky miaraka amin'ireo mpiara-miasa ao an-toerana izy io mba hahatonga ny fitsidihana an'i Meteora hanana traikefa manankarena. Ny fifandraisana akaiky amin'ireo olona eo an-toerana sy ireo manam-pahaizana dia nanampy tamin'ny famolavolana fitsangatsanganana sy fitsangatsanganana tany Meteora izay maneho ny fanahiny ary manampy ny mpitsidika rehetra hikasika ny hakantony. Mampivoatra ny fitsangantsanganana ary miantoka ny fahazoan'ny mpandeha ny votoatin'ny toerana.
Raiso, ohatra, ny fitsangantsangan'ny filentehan'ny masoandro any Meteora. Mahagaga. Izy io dia zavatra niainana izay hijanona ao anaty saina sy fanahy mandrakizay. Toy izany koa, ny fitsangatsangana amin'ny alàlan'ny ala goavam-be any Meteora dia manahirana ary mahatonga ny vahiny hanosika ny valopy ary mandritra izany fotoana izany, hahita indray ny tanjany ary koa ny fomba fijery mahavariana ny toerana.
7 taona lasa izay, ary ny orinasa dia mbola miasa ny drafi-pandraharahana. Rehefa nanapa-kevitra ny hamandrika ny anaran'ny domain Visit Meteora ho an'ny tranonkalany izy dia hitan'ny orinasa fa tsy misy io anarana io ary nanomboka nieritreritra vahaolana hafa. Toy izao no nifandraisany tamin'ny .travel ary niara-niasa tamin'ny domain .travel nanomboka teo. Faly ny orinasa rehefa mahatsapa ny tombony fanampiny mety ho azony tamin'ny vahaolana .travel. Mampiseho an'izao tontolo izao fa ny orinasa dia orinasa mifandraika amin'ny dia sy fizahan-tany ary ekena ho anisan'io vondrom-piarahamonina io. Mamela azy io hampiditra ny sehatra amin'ny marika ary izy no vahaolana tsara indrindra ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany.
Tsidiho ny Meteora fa ny anaran'ny sehatra visitmeteora.travel dia nanampy azy hametraka ny fototry ny ankehitriny, ary mieritreritra izy fa ny domain .travel dia hanampy azy bebe kokoa amin'ny dingana manaraka amin'ny fampandrosoana ny tranonkala. Ny sehatra dia ny maha izy azy ary ny orinasa dia afa-po amin'ny traikefa amin'ny .travel hatreto.
Tsy ny orinasa ihany no afaka namandrika ny sehatra irina izay tsy nisy tamin'ny voalohany, fa koa ny motera fikarohana dia nanome lanja ny fanitarana .travel satria misy dikany amin'ny alàlan'ny fifandraisany mivantana amin'ny dia sy fizahan-tany.
Ny fiaraha-miasa amin'ny .travel dia traikefa tena tsara, ary ny orinasa dia hanome sosokevitra amin'ny olona rehetra hanandrana sy hampiasa izany amin'ny tranokalan'ny orinasan-dry zareo tsy misy fisalasalana.
Raha mila fanazavana fanampiny: miavia.travel